Gbasara Anyị - Qingdao New Asia Pacific Group Company
E guzobere ụlọ ọrụ Qingdao New Asia Pacific Group na 2000 na obodo Qingdao mara mma nke nwere nnukwu osimiri. Trafficgbọ njem mmiri na ụgbọ mmiri na-adabara adaba.
Anyị ụlọ ọrụ nwere ike oru ike na teknuzu otu. A na-ere ngwaahịa anyị n'ọtụtụ mba dịka Japan, Malaysia, USA na ọtụtụ mba Europe. Ngwaahịa anyị dị mma na ọnụahịa ọnụahịa.
NAP na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke ndị ahịa mbụ, ọrụ otu, iguzosi ike n'ezi ihe, agụụ na nraranye. Ndị otu ahịa anyị na-enye ndị ahịa anyị ezigbo ọrụ.
Ngwaahịa anyị bụ ngwaahịa na-echebe oke dịka ọta ihu, akpa eji efe efe, uwe nchebe, uwe mwepụ iche, akwa ịwa ahụ, ngwa ule ngwa ngwa (cassette test) wdg. Asambodo CE ma ọ bụ FDA dị.
1. Ngwaahịa a na-eji PET dị elu maka ịnọpụ iche na nchedo ihu niile.
2. Ngwaahịa ahụ dị nha nha, dị elu nghọta, dịkwa mma iyi.
3. Nchedo nchekwa, arụmọrụ dị elu na-egbochi iweze na mmiri.
4. Na-egbochi nke ọma n'ọhụụ n'ihi oke ọdịiche nke ikuku na uzu mmiri.
A na-eji ọta ihu na ndụ kwa ụbọchị yana mmepụta ya kwa ụbọchị. Enwere ike iji ya na ebe omumu ihe, ebe oru, kichin, uzo mmiri na ezumike, oriri ndi ozo, nzuko wdg.
Mmetụta nchebe: ntụ-mgbochi, mmanụ na-esi na kichin, mgbochi mmiri, mgbochi mmiri, nsị, mmiri na-abụghị ọgwụ.
* mgbochi mgbochi, mmanụ na-egbochi, ájá mgbochi, iji ọtụtụ ihe n'ọhịa dị iche iche. Iji ya mee ihe otu, ibu dị mfe, mgbochi mmiri, nri nri.
Aprons na-eguzogide mmiri, mmanụ na mmanụ.
Ìhè, adaba, ntụ-aja, ihe mgbapụta mmanụ, ihe ruru unyi.
* Ọ dị ọnụ ala ma ọ dị mfe, yana Acid na Alkali na-eguzogide, nke enwere ike iji ya na nyocha nke kemịkalụ, nchebe na ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo, nsị, nsị na ihe ndị ọzọ.
Ihe: Popropropylene gbara pinebonded PE ịchaghị mkpuchi
Ọdịnaya: 100% polyester
Uru: Antibacterial, Anti-static, Soft, Waterproof, Breathable
Usoro ahụ dum na akụrụngwa ruru ụkpụrụ kachasị elu.
Ọ nwere ezigbo mgbochi mgbochi, arụmọrụ dị elu, nrụgide elu mmiri, ike na oke ikuku, nke na-enye ya ohere igbochi mmiri na uzuzu n'ụzọ dị mma.
Disposable Mwepu Gond
Ojiji a na-ewepu iche bụ ihe na - enweghị aka iji nye ndị ọrịa ihe mgbochi' anụ ahụ na mmiri. A na-ejikarị ya maka ọgwụgwọ na nyocha nke ọrịa na-efe efe na ebe ọha. Ọ nwekwara ike iji ya rụọ ọrụ ugbo, ịkọ anụ ụlọ, nchebe gburugburu ebe obibi, na ihe ndị ọzọ.
A na-ebipụ Gowns anyị karịa n'ime obi na aka uwe maka onye na-ebu ọnụ. Fabrickwà ahụ na-esighị ike na mmiri gosipụtara iji teknụzụ dị elu nke na-eweta mkpọtụ na-eguzogide. Ọ na - eme ka ahụ ruo gị ala ka ị na - arụ ọrụ, na - enyere gị aka inwe obi ike na njikwa.
Ezigbo mma na ọnụahịa ọnụahịa.
Ngwa nnwale ọsọ ọsọ / kaseti nyocha
Ọrịa Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody Nnwale bụ ngwa immunochromatographic ngwa ngwa, ruru eru ma dịkwa mma. in vitro kwụọ ụgwọ maka nchọpụta ọdịiche dị na nje IgM & IgG na nje COVID-19 n'ọbara mmadụ, plasma ma ọ bụ ihe nlele ọbara niile enwetara n'aka onye ọrịa butere ọrịa COVID-19. Emebere ngwaọrụ a iji nyere aka na mkpebi siri ike nke ekpughere nje COVID-19 na nso nso a ma ọ bụ na-esochi ọnọdụ ọrịa ahụ mgbe oria COVID-19 bu oria. Ngwa ngwongwo a dị ngwa na-ere nke ọma.
Ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla biko egbula oge ịkpọtụrụ onye na - ere ahịa. Email:Cynthia@napgroup.net Nabata ajụjụ gị!
Uwe Nchedo, Uwe ọgwụ A na-atụfu, Mmiri Proof, Gowns chebe ya, Dust-Proof Pet Face Shield, Mmiri Proof Hdpe Apron,